Kwidziridza (12/30/2019 @ 01:00 AM ET): Mukuburitswa mutsva, OPPO yakataura kuti iyo Reno3 inouya ne Sony IMX686 sensor, nepo Reno3 Pro inouya ne Sony IMX586 sensor. Chinyorwa chakaburitswa musi waZvita 26, 2019, chakachengetedzwa sezviri pazasi.
OPPO inoda kuve inopfuura yebrown brand muna 2020, asi smartphones ichiri kugadzira iyo yepakati po muchiono chayo, padivi pe5G. Iyo ramangwana ndeye 5G, zvakanyanya, uye OPPO iri kuendesa arcane yayo ne 5G-yakagadzirira smartphones muchimiro cheOPPO Reno3 uye OPPO Reno3 Pro. Iyo OPPO Reno3 Pro yakanyengedzwa kuti ive yepasiresenest mbiri mbiri-mod 5G foni pamwe Qualcomm Snapdragon 765G mukati, uku OPPO Reno3 ichave yakashongedzwa nokuda MediaTek Kukura 1000L 5G SoC. Mifananidzo mhenyu yefoni dzese zviri zviviri yakanga yafira isati yatanga, uye zvino, nhare idzi dzese dzakatangwa pachiitiko muChina.
OPPO Reno3 XDA Foramu
OPPO Reno3 uye OPPO Reno3 Pro: Nhaurwa
Miganhu uye Weight -
6.44 ″ FHD + flat AMOLED
6.5 ″ FHD + yakakoshwa AMOLED
90Hz zororo zororo
180Hz kubata kwekuonekwa
100% DCI-P3 kufukidza
HDR 10+ rutsigiro
Punch hole pamberi kamera
SoC MediaTek Kukura 1000L:
4x ARM Cortex-A77 "hombe" cores @ 2.6GHz
4x ARM Cortex-A55 "madiki" cores @ 2.0GHz
1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76-based) Prime pakati @ 2.4GHz
1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76-based) Performance yakakosha @ 2.2GHz
6x (ARM Cortex-A55-based) Kushanda kwemhando @ 1.8GHz
30W VOOC Kuraidza 4.0
Kutanga: 64MP Sony IMX686, f / 1.8
Sekondari: 8MP, yekupedzisira-yakafara-pakona
Chikoro chepamusoro: Monochrome
Kutanga: 48MP Sony IMX586, f / 1.7, PDAF, OIS, EIS
Sekondari: 13MP, telephoto, f / 2.4, 2x
Chikoro chepamusoro: 8MP, Ultra-wide-angle, f / 2.2, 116 ° FoV
Quarternary: 2MP, monochrome, f / 2.4
1080p @ 120fps, 720p @ 240fps
Front Camera 32MP 32MP, f / 2.4
Android Version ColorOS 7 yakavakirwa paApple 10 ColorOS 7 yakavakirwa paApple 10
4G: TD-LTE mabhendi 34/38/39/40/41
Ose maviri OPPO Reno3 uye OPPO Reno3 Pro vanogoverana akati wandei magadzirirwo maitiro, asi musiyano mukuru pakati pevaviri kuvapo kwechitafura chinoratidzwa pane yakajairwa Reno3 uye yakatenderedzwa chiratidziro paPro. Ratidza diagonal zviyero zvinoshanduka nekuda kweichi, asi sezvo tisingakwanise kuwana danho rekuderedzwa pane zvinogara zvichitaridzika, hatikwanisi kupa chirevo kana michina iri chero yakaenzana muhukuru. Musiyano wechipiri uri mukamera yekumberi - iyo Pro inowana gomba-punch kamera, nepo chinogara chichiitika chinowana notd yemvura. Kumusana, hapana inooneka shanduko dhizaini, asi mamiriro ekamera anochinja.
Iyo OPPO Reno3 inodzikwa seyemukati mwana kune Pro. Nehurombo, iyo peji yeOPPO yechigadzirwa cheiyo Reno3 haina kugona kuwanikwa, uye WeOPPO mukuru Weibo zvakare yakanyarara pane akati wandei.
Zvatinoziva nezve OPPO Reno3 inyaya yekuti inouya neMediaTek Dimensity 1000L SoC, inova 7nm yakakwira-kuguma SoC kubva kuMediaTek ine integrated 5G. Unogona kuverenga zvakawanda nezve Dimensity 1000 mune yedu yakazvipira kufukidzwa, kunyangwe isu takatadza kuwana mutsauko pakati pe1000 ne1000L zvakadaro. Iko kune 30W VOOC Kuchaja 4.0 pabheji, iyo inogona kubhadharisa foni 0-50% mune makumi maviri chete.
Iyo Reno3 inouyawo neyakagadzirwa Quad rekumashure kamera, neyekutanga shooter iri 64MP sensor OPPO haina kunyatsotsanangura iyo sensor yaakashandisa, asi fungidziro yedu ingave kuti ndeye ari Samsung ISOCELL GW1 panzvimbo ye ari Sony IMX686. Iyo yechipiri kamera ndeye 8MP Ultra-wide-angle shooter, neyechitatu iri monochrome kamera, uye yechina kamera kamera yakatsaurwa yekubatsira mukutora mifananidzo.
Iyo Oppo Reno3 ichave inowanikwa CNY 3,399 (~ $ 485) yeiyo 8GB + 128GB musiyano, uye CNY 3,699 (~ $ 530) yeiyo 12GB / 128GB musiyano.
Runhare ruchawanikwa muSunrise Impression, Starry Blue, Moonlight Black, uye Misty White mavara, uye ichave inowanikwa muChina kubva Zvita 31, 2019.
Sezvinoreva zita iri, Reno3 Pro ndiye hama hombe, uye zvinowana kurongeka kwekufarirwa, sezvinoonekwa kubva kumucheto wakatemerwa kuratidzwa pamwe neiyo 90Hz yekumutsiridza chiyero uye HDR 10+ rutsigiro. OPPO inotaurawo kuti chishandiso ndiyo inotetepa-dhiinhi modhi 5G inowanikwa mumusika, uye kunyangwe iri mbiri yakasimba, ichiri kukwanisa kurongedza mubhatiri re 4,025 mAh.
Iyo OPPO Reno3 Pro inouya neQualcomm Snapdragon 765G, inova Qualcomm yekutanga SoC ine yakabatanidzwa 5G, ichibvumira kushandiswa kwakaderera kwemagetsi sekumirisana neSoC ine modhiyo yakasarudzika. Iyo Snapdragon X52 modem pane iyo Snapdragon 765 iri, zvisinei, yakaderera pane 5G yekubatana seyakapesana ne Snapdragon X55 modem pane Snapdragon 865. Kunyange zvakadaro, iwe unogona kutarisira kumwe kuita kwakanaka pafoni maererano nekuyerera pamwe nekubatana.
Iyo kamera setup pane Pro haina kunakidza, asi ichiri yakasarudzika. Iwe unowana iyo yakaidzwa uye yakaedzwa 48MP Sony IMX586 seyo kamera yako huru, 13MP telephoto kamera ye2x zoom, ine 8MP Ultra-wide-angle kamera, uye 2MP monochrome shooter.
Iyo Reno3 Pro inouyawo nerutsigiro rwe 30W VOOC Kuchaja 4.0.
Iyo Oppo Reno3 Pro ichave inowanikwa CNY 3,999 (~ $ 570) yeiyo 8GB + 128GB musiyano, uye CNY 4,499 (~ $ 640) yeiyo 12GB / 256GB musiyano.
Iyo base kuchengetwa musiyano ichave inowanikwa muChina pane pre-kuraira kubva Zvita 31, 2019, nepo yakakwirira yekuchengetedza musiyano ichave iripo kubva muna Ndira 10, 2020 zvichikwira.
Pantone 2020 Yakakosha Edition
Iko kune OPPO Reno3 Pro Pantone 2020 yakasarudzika yakasarudzika zvakare, iyo inoshandisa Classic Blue, ruvara rwe2020. Iyo yakazara yekuisa uye bhokisi yezvinyorwa muPantone 2020 yakasarudzika nzira ichave yebhuruu uye chena.
Mutengo wedzidziso iyi yakasarudzika ne8GB + 128GB ichave CNY 4,199 (~ $ 600).
Kwidziridzo: OPPO Reno3 inouya ne 64MP Sony IMX686 sensor
Mutsva mupepanhau, OPPO yakataura kuti iyo Reno3 inouya neiyo 64MP Sony IMX686 sensor, uye kwete neiyo ISOCELL GW1 sezvataifungira pakutanga. Yakabatanidzwa neiyo iri nani kufungidzirwa yeMediaTek Dimensity 1000L SoC, iyo Reno3 inoshamisa mitambo ine mashoma akanangana akakosha pane pane Reno3 Pro.
Ndeipi pfungwa dzako pane iyo OPPO Reno3 uye OPPO Reno3 Pro? Ngatizivisei mune zvakataurwa pasi apa!
The post [Kwidziridzwa: Sony IMX686] OPPO Reno3 uye Reno3 Pro yakatangwa muChina iine 5G yekubatana, Quad kumashure kamera, nezvimwe yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Oppo Reno3 Pro uye Oppo Reno3 vari pamutemo vane 5G kunze kwebhokisi
OPPO Reno 4 uye Reno 4 Pro ine Snapdragon 765G uye 65W SuperVOOC 2.0 kuchaja kwakatangwa muChina